Dhacdo naxdin leh”Gabar 11 jir ah oo uu kufsaday awoowgeed oo uur yeelatay | Baahin Media
Dhacdo naxdin leh”Gabar 11 jir ah oo uu kufsaday awoowgeed oo uur yeelatay
Gabadhaan 11 jirka ee la kufaday ayaa waxa ay dood badan ka dhalisay sharciga iska soo xaaqidda ilmaha ee dalka Argentina.
Inantan ayaa uur yeelatay kadib markii uu kufsaday awoogeed oo 65 sano jir ah kadibna waxa ay codsatay in ilmaha laga soo xaaqo.
Hase-yeeshee, codsigeeda ayaa dib loo dhigay muddo shan toddobaad ah oo dhaqaatiirka ayaa diidday in ay ka soo xaaqaan canugga, badalkii ay taasi sameeyn lahaayeena waxa ay ku sameeyeen qalliin canuga looga soo saarayo.
Canugga waa uu nool-yahay balse dhaqaatiirka ayaa sheegtay in ay aad u adagtahay in canugga sii noolaado.
Gabdha waxa ay uurka lahayd 23 toddobaad markii dib loo dhigayay in ilmaha laga soo xaaqo.
Warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in gabadha markii uu uurka ku hor lahaa ay dooneeysay in ilmaha laga soo xaaqo, iyadoona saraakisha u sheegtay: ” Waxa aan rabaa in layga soo saaro waxaa uu caloosha ii galiyey ninka da’da ah.”
Sharciga Argentina ayaa ogol Iska soo xaaqidda ilmaha, haddii qofka la kufsado amaba uu caafimaadkiisa khatar ku jira balse kiiskaan gabadhaan 11 jirka ah ayaa muran badan dhaliyay.
Maamulada caafimaadka ee waqooyiga gobolka Tucumán ayaa Talaadadii madaxa isbitaalka ku amray in ay dhaqaatiirta fuliyaan rabitaanka qooyska gabadha si loo qaado tallaabo lagama maarmaan ah oo lagu badbaadinaayo nolosha canugga iyo hooyadiiba.
Dhaqaatiirta fulisay qalliinka ayaa sababta ku sheegay in ay raaceen amarka la siiyay ee ahaa in ay badbaadiyaan canugga iyo gabdha yarba.
Balse ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa dhaleecayn dusha kaga tuuray maamulka caafimaadka ee gobolka Tucumán.